Hordhac: Barcelona v Real Madrid – Kooxaha Ku Tartamaya Horyaalka La Liga Oo Ku Kulmaya El Clasico Aad U Muhim Ah
Kulanka: Barcelona v Real Madrid
Garoonka: Nou Camp
Waqtiga: 11pm Saacada Geeska Afrika
El Clasico…. Ugu danbeyn waxaa la soo gaaray kulankii aan sugeynay in muddo ah, waa kulan kaliya ee kubada cagta ee ugu hadal heynta badan marka ay timaado kooxaha kubada cagta, waana kulan xiisad iyo xamaasad leh marka loo fiiriyo xiddigaha garoonka soo galaya, xurgufta kubadeed iyo siyaasadeed ee u dhaxeysa labada kooxood. Waa kulan kubad farsameysan oo lagu raaxeysto iyo goolal cajiib ah laga filan karo, waana kulan inta badan go’aan ka gaara halka uu u jiheysanayo horyaalka La Liga.
Macalinka Barcelona Luis Enrique ayaa ka rajeynaya weeraryahankiisa Lionel Messi inuu sii wato qaab ciyaareedkiisa fiican ee uu ku jiro marka kooxdiisa ay martigelineyso caawa kooxda Real Madrid kulanka sida weyn caalamka looga sugayo ee El Clascico. Messi ayaa si weyn loogu amaanay qaab ciyaareedkiisii Manchester City ee bartamihii isbuucii hore isagoo ka caawiyay kooxda Azulgrana inay u soo baxdo wareega 8da Champions League.
Guushaas ayaana aheyd sii socoshada guulaha kooxda ee tartamada oo dhan, iyagoo badiyay sagaal ka mid ah 10kii kulan ee ugu danbeysay La Liga taasoo keentay inay dhibic ka sarre maraan Real Madrid. Enrique waxaa ka maqnaan doona xiddiga khadka dhexe Sergio Busquets kaasoo weli ka soo kabsanaya dhaawac canqowga ah, laakiin goolhaya Claudio Bravo ayaa goolka ka bedeli doona Marc-Andre ter Stegen.
Real Madrid ayaa soo booqaneysa Camp Nou iyagoo helay todoba maalmood oo ay ku nastaan islamarkaana ay firfircooni ku dareemaan ka dib markii ay 2-0 kaga badiyeen Levante kulankoodoo ugu danbeysay ee horyaalka. Natiijadaas ayaana muhim u aheyd ka hor kulanka Nou Cap, laakiin tababare Carlo Ancelotti ayaa ka warqaba muhiimada kulankaan, haddii ay badiyaan waxa ay ku soo laabanayaan hogaanka La Liga, waxaana ay dib u helayaan kalsoonidooda, laakiin guuldarro soo gaarta waxa ay keeni doontaa in Barca ay afar dhibcood ku qabato hogaanka islamarkaana uu macalinka Talyaaniga ku sii dhawaado albaabka looga baxo Santiago Bernabeu.
Xiddiga garabka ka ciyaara Gareth Bale ayaa dhaliyay labo gool isbuucii hore isagoo aamusiyay kuwii shakiga gelinayay qaab ciyaareedkiisa, laakiin xiddiga reer Wales waxa uu u baahan yahay inuu qaab ciyaareed weyn soo bandhigo kulanka ay caawa kooxdiisa la ciyaareyso cadowgooda ugu weyn ee kubada cagta. Xiddiga khadka dhexe Toni Kroos ayaa la filayaa in dib uu ugu soo laabto shaxda isagoo bedelaya Lucas Silva, laakiin Raphael Varane ayay u badan tahay inuu kursiga keydka ku bilaaban doono.
SHAXDA MACQUULKA AH:Barcelona: Bravo; Alves, Pique, Mathieu, Alba; Mascherano, Iniesta, Rakitic; Neymar, Messi, Suarez
Real Madrid: Casillas; Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, Isco; Bale, Benzema, Ronaldo
Juve Oo La Wareegeysa Falcao & PSG Oo Dooneysa Ivanovic – Wararka Suuqa Kala Iibsiga Iyo Xanta Wargeysyada Ingariiska Ee Maanta Oo Sabti Ah.
Maalin wanaagsan akhristayaasheena meel kasta oo aad joogtaan, ku soo dhawaada barnaamijkeena aan kaga hadalno suuqa kala iibsiga iyo wararkii ay ka qoreen wargeysyada, inkastoo suuqa kala iibsiga waqtiga qaboobaha uu soo xirmay hadana xanta halkaas kuma joogsato iyadoo durbaba la isku diyaarinayo suuqa kala iibsiga xagaaga. Kooxaha ayaa haatan sii bartilmaameedsanaya ciyaartoyda ay doonayaan xagaaga, halka kuwa kale ay heshiisyo hordhac ah la sii galayaan ciyaartoyda qandaraaskooda uu dhacayo xagaaga. Waxaana maanta idiin soo uruurinay wararkii ugu waa weynaa ee ay qoreen wargeysyada Ingariiska.
Juventus ayaa isku diyaarineysa inay dalab ka gudbiso weeraryahanka amaahda ku jooga Manchester United ee Radamel Falcao oo 29 sanno jir ah kaasoo ku dhibtooday inuu saameyn ku yeesho kooxda Old Trafford ka dhisan ka dib markii uu kaga soo biiray Monaco. (Tuttosport)
Macalinka Manchester City Manuel Pellegrini ayaa soo jeediyay in kooxda heysata horyaalka Premier League ay sameysay wax walba oo ay kaga dhaadhicin kartay James Milner inuu heshiis waqti dheer ah u saxiixo kooxda. (Manchester Evening News)
Weeraryahanka Liverpool Raheem Sterling oo 20 sanno jir ah ayaa dib u dhigay wadahadaladii qandaraas kordhinta ee kooxda ilaa iyo dhamaadka xilli ciyaareedkan isagoo doonaya inuu diirada saaro kulamada uga haray kooxda horyaalka premier League iyo ku guuleysiga FA Cup. (Daily Mirror)
Kooxaha Real Madrid iyo Bayern Munich ayaa iyagana si dhow u la socda xaalada Raheem Sterling kaasoo qandaraaskiisa Liverpool ee haatan uu dhacayo xagaaga 2017. (Daily Mail)
Manchester United ayaa wadada u saaran inay soo xerogeliso xiddiga kooxda PSV Eindhoven 21 sanno jirka Memphis Depat xagaagan. (Daily Mirror)
Paris St-Germain ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo xagaaga 31 jirka daafaca Chelsea Branislav Ivanovic kaasoo la rumeysan yahay in loo soo bandhigay heshiis hal sanno ah oo uu ku sii joogayo Old Trafford. (Daily Express)
Manchester United ayaa wadahadalo la furaneysa wakiilka Cristiano Ronaldo Jorge Mendes iyagoo doonaya inay si lama filaan dib ugala soo wareegaan Real Madrid. (Fichajes)
Goolhayaha Manchester United David de Gea ayaa kooxda baaqi ku sii ahaan doona ka dib markii uu ogaaday in Real Madrid ay la soo wareegeyso goolhayaha kooxda River Plate Augusto Batalla. (AS)
Liverpool ayaa weli qiimeyneysa xaalada xiddiga khadka dhexe ee Bayer Leverkusen Hakan Calhanoglu. (Metro)
Real Madrid Iyo Bayern Munich Oo Albaabka U Soo Garaacaya Liverpool Iyadoo Raheem Sterling Uu Dib U Dhigay Qandaraas Cusub Uu Saxiixo.
Weeraryahanka Liverpool Raheem Sterling ayaa dib u dhigay wadahadalada qandaraas cusub ilaa iyo dhamaadka xilli ciyaareedkan. Waxaana arintaani ay shaki cusub gelineysaa mustaqbalka dheer ee xiddiga England ee kooxda Anfield ka dhisan.
Sterling ayaa wadahadalo qandaraas kordhin ah kula jiray Liverpool bilooyinkii ugu danbeysay laakiin 20 jirkaan ayaa u sheegay madaxda kooxda inuu doonayo inuu diirada saaro kulamada Liverpool uga haray xilli ciyaareedka Premier League iyo FA Cup.
Waxaana warkaan uu walwalgeliyay madaxda kooxda kuwaasoo si weyn ugu baahan inay qandaraas cusub oo waqti dheer ah ka saxiixaan xiddigaan, waxaana ay wadahadalada dib u bilaaban doonaan xagaaga, iyadoo qandaraaskiisa haatan oo dhacaya xagaaga 2017 uu isbuucii ku qaato 35 kun ginni.
Iyadoo Sterling uu ka mid yahay xiddigaha u soo baxaya kubada cagta caalamka, Real Madrid iyo Bayern Munich ayaa si dhow u la socda xaaladiisa. Si la mid ah kooxaha Premier League ayaa sidoo kale jecel inay tartanka ku soo biiraan haddii suuqa kala iibsiga la soo saaro.
Macalinka Liverpool Brendan Rodgers ayaa sheegay in Sterling loo soo bandhigay heshiis aad u qiimo badan oo la fahamsan yahay inuu isbuucii ku qaadanayo 100 kun ginni. Rodgers ayaa hore u sheegay in Sterling uu ku dhow yahay inuu qalinka ku duugo warqada heshiiska lakiin ilaa iyo haatan weli heshiis lama gaarin.
Shaxda Gerrard Vs Shaxda Carragher Ee Kulanka Samafalka Ah Ee Gerrard Lagu Sagootinayo: Kooxdee Ayaad Filaysaa Inay Fiican Tahay?
Kooxda Liverpool ayaa hore u xaqiijisay ciyaartoyda ka qeybgalaya kulan xiddigaha adduunka ah oo ay kala hogaamin doonaan Steven Gerrard iyo Jamie Carragher oo dhamaadka bishaan ka dhici doona Anfield.
Kulankaan taburacaada ah ayaa waxaa soo qaban qaabisay Liverpool Foundation, waxaana ka qeybgalaya ciyaartoy ay Gerrard iyo Carragher ka garab ciyaareed iyo kuwii ugu fiicnaa ee ay ka horyimaadeen.Kulankan ayaa la ciyaari doonaa 29ka bisha March, xiddigaha Liverpool haatan u jooga ee aan ku maqnaan doonin isbuucaas ciyaaraha heerka caalami ayaa iyagana ka qeyb qaadan doona.
Kulankan ayaa jamaahiirta Liverpool fursad u siinaya inay daawadaan Gerrard oo Infield kaga garab ciyaaraya Luis Suarez, Fernando Torres, Xabi Alonso iyo halyayada Arsenal iyo Chelsea ee Henry iyo Terry. Gerrard ayaa labada dhinacba u ciyaari doona.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa shaxda Gerrard iyo Carragher ay iskala hor iman doonaan.
Shaxda Uu Gerrard ku soo gali doono ayaa ah: Jones,Riise,John Terry, Warnock,Alonso,Nolan,Babel, Gerrard,Henry, Torres iyo Suarez
Shaxda uu Carragher ku soo gali doono ayaa ah: Reina,Kelly, Carragher,Arbelao,Garcia, Shelvey, Maeireles, Noone, Bellamay, Kuyt iyo Drogba.
Haddaba akhirte kulankan xiisaha badan ee ay ka qayb galayaan ciyaartoyda kubbada cagta magaca iyo maamuuska kulihi isala markaana ay isku arki doonaan saaxiibo kala baaday, midkee ayaad filaysaa inay tahay kooxda fiican?
Tani Waxay Ahayd Aargudasho: Madax Waynaha PSG Ee Nasser al-Khelaifi Oo Farxad Wayn Ka Muujiyay In Kooxdiisu Ay Chelsea Ka Reebtay Champions leaque
Iyada oo waxa loogu hadal haynta badnaa xalay ilaa maanta ay ahayd qaabkii ay PSG xalay kooxda Chelsea Stamford Bridge ugaga reebtay Champions Leaque,ayuu madax waynaha kooxda PSG ee Nasser al-Khelaifi si wayn kooxdiisa iyo waliba tababaraha ugu bogaadiyay, wuxuuna farxad wayn ka muujiyay inay u soo baxeen wareega sideed dhamaadka Champions Leaque-ga.
Waa markii ugu horaysay ee ay PSG u soo baxdo wareega sideed dhamaadka intii ay maalqabeenada carbeed la wareegeen kooxda. Nasser al-Khelaifi ayaa ciyaartoydiisa ku amaanay in iyaga oo in ka badan 95 daqiiqo ku ciyaarayay 10 ciyaartoy inay haddana kulan adag ismuujiyeen.
Inkasta oo ay Chelsea laba jeer goolal ku hormartay ayay haddana difaacyada ree Brazil ee Luiz iyo Silva labada jeerba barbareeyeen taas oo keentay in PSG ay ku soo baxdo xeerka goolasha martida ah.
Madax waynaha PSG ee al-Khelaifi ayaa yidhi: “Hubaal waa mid ka mid ah natiijooyinkayaga ugu fiican, In aanu halkan Stamford Bridge kaga soo baxnaa waxay ahayd mid aad u adag, may ahayn wax sahlan, laakiin ciyaartoyda iyo tababaraha ayaa cadeeyay inay dhacdo waananu samaynay.
“Xaqiiqdii waxay ahayd kalsooni aanu qabnay kulanka ka hor, taas ayaanan u sii sheegay, waxaan lahaa dareen ah inaanu soo baxayno, sababtoo ah waxaan indhaha ciyaartoyda ka arkaayay rumaysnaantooda”.
Madax waynaha oo ka hadlaya in ay in kabadan 95 daqiiqo ku ciyaarayeen 10 ciyaartoy taasina ayna waxba ka badalin kooxdiisa ayaa yidhi: “Xaqiiqdii waxaanu u ciyaarnay si fiican, xataa markii aanu in kabadan 95 daqiiqo ku ciyaaraynay 10 ciyaartoy, waxaanu u qalanay inaanu guulaysano.Xaqiiqdii waxay muhiim u ahayd mashruucayaga, tan iyo markii aanu kooxda iibsanay waxaanu aaminsanayn hanaankayaga, waxaanu aaminsanayn bartilmaameedkayaga, waxaanu nahay koox wayn waxaananu garaaci karnaa kooxaha kale ee waa wayn, taasna waxaa hadda cadeeyay ciyaartoydayada”.
Ugu danbayn madax waynaha ayaa cadeeyay inay kooxdiisu ka aarsatay Chelsea kadib markii ay xili ciyaareedkii hore ka soo gaadhay guuldaradii ugu xumayd muddo afar sano ah.
“sanadkii hore waxay guuldaro naga soo gaadhay Chelsea, xaqiiqadii waxay ahayd mid adag, waxay ahayd guuldaradii iigu xumayd muddadii afarto sano ee la soo dhaafay. Ciyaartoydu waxay wax ka barteen xili ciyaareedkii hore, waxayna tani ciyaartoyda, tabaabraha iyo qofkastaba u ahayd aargudasho”
Cristiano Ronaldo Oo Sii Wata Jabinta Rikoorada, Waxa Uu La Liga U Dhigay Rikoor Cusub
Cristiano Ronaldo ayaa sii wata jabinta rikoorada. Gool ku laadkii uu ka dhaliyay Villarreal ayaa ka dhigtay inuu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay taariikhda ee 30 gool ama wax ka badan dhaliya shan xilli ciyaareed oo isku xigta horyaalka La Liga.
Tan iyo markii uu ku biiray Real Madrid waxa uu ku guuldareystay kaliya hal xilli ciyaareed inuu gaaro 30 gool, waana xilli ciyaareedkiisii ugu horeysay ee 2009-10 oo uu dhaliyay 26 gool.
Xilli ciyaareedkii ku xigay 2010-11 waxa uu dhaliyay 41 gool, waxaana uu goolka 30aad ee xilli ciyaareedkaas uu ka dhaliyay Barcelona. Sannadkaas waxa uu qaatay gooldhalinta horyaalka.
Xilli ciyaareedkii ku sii xigay 2011-12 waxa uu dhigay rikoorkiisa shaqsiga ah ee La Liga isagoo dhaliyay 46 gool, ma uusan aheyn xiddiga qaaday gooldhalinta xilli ciyaareedkaas waxaana ka qaaday Messi oo dhigay rikoorka gooldhalinta La Liga xilli ciyaareedkaas oo 50 gool aheyd. Goolka 30aad ee xilli ciyaareedkaas ee Ronaldo waxa uu ka dhaliyay Espanyol.
Cristiano ayaa xilli ciyaareedkii 2012-13 waxa uu dhaliyay 34 gool horyaalka La Liga, waxaana uu goolkiisii 30aad ka dhaliyay Athletic Bilbao. Xilli ciyaareedkii hore waxa uu dhaliyay 31 gool isagoo noqday gooldhaliyaha xilli ciyaareedka waxaana uu goolka 30aad ka dhaliyay kooxda Osasuna.
Sannadkaan waxa uu durbaba gaaray 30 gool isagoo habeen hore shabaqa ka soo taabtay Villarreal. Waxa uu hogaanka u hayaa gooldhalinta horyaalka isagoo seddex gool ka horeeya Messi.
Messi ayaana ahaa xiddiga fursada ugu fiican u heystay inuu noqdo xiddigii hore ugu horeeyay ee 30 gool ama wax ka badan dhaliya shan xilli ciyaareed oo isku xigta, isagoo dhaliyay 34 gool 2009-2010, 31 gool 2010-2011, 50 gool 2011-2012 iyo 46 gool 2012-2013, laakiin xilli ciyaareedkii hore waxa uu dhaliyay kaliya 28 gool.
Pellegrini Oo Heysta 12 Kulan Uu Ku Badbaadiyo Mustaqbalkiisa City Haddii Kale Guardiola Ayaa Bedelaya
Manuel Pellegrini ayaa heysta 12ka kulan ee ka haray xilli ciyaareedka Manchester City inuu ku badbaadsado shaqadiisa, iyadoo tababaraha uu u baahan yahay inuu sameeyo midkood inuu difaacdo koobka horyaalka Premier League ama inuu ku guuleysto Champions League, haddii kale Pep Guardiola ayaa loogu dhawaan doonaa inuu bedelo, sida ay qortay jariirada Ingariiska ee The Guardian.
Haddii Man City ay ku guuldareysato inay qaado horyaalka ama koobka Champions League, waxa ay xilli ciyaareedka ku dhameysan doonaan koobab la’aan, Pellegrini ayaana laga yaabaa in la ceyriyo markaas dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Pellegrini ayaa si weyn looga ixtiraamaa City ka soo bilow madaxda kooxda ilaa iyo ciyaartoyda kooxda koowaad, sidaasi darted madaxda kooxda waa ay ka cagajiidayaan inay ceyriyaan. Si kastaba qaab ciyareedka aan la isku haleyn Karin ee ay Man City ku soo bandhigtay Champions League iyo Premier League ayaa keeneysa in aragti isku mid ah ka heystaan Pellegrini taasoo ah inuusan horumarinin kooxda.
Man City ayaa si la mid ah xaalada uu Pellegrini haatan ku jiro ku ceyrisay, waxaana macquul ah in milkiilaha carbeed uusan ku feker noqonin madaxda Isbaanisha ee kooxda maamusha oo uu ceyriyo 61 jirkaan dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Tababaraha Bayern Munich Pep Guardiola ayaana lagu waramayaa inuu bedelkiisa noqon karo, halka wararka qaar ay sheegeyaan in macalinka Real Madrid Carlo Ancelotti lagu soo celin karo Premier League.